Fumanisa ukuba wenze ntoni kwaye wenzeni njani kwi-coronavirus Lockdown ezayo: UMartin Vrijland
Usodolophu wase-Amsterdam u-Femke Halsema osele ehambile izolo iingcebiso ukuba ukuvalwa ngokupheleleyo kwe-Amsterdam akuyi kumangalisa. Vuliwe 18 Matshi UDe Telegraaf uxele ukuba amapolisa sele elungiselela ukuvalwa ngokupheleleyo. Ingxelo kwiTelegraaf ye phezolo ukuba ubhubhane umkhuhlane ubuyile kwakhona kubonakala ngathi ithi ingxaki ngoku iphindwe kabini, ngenxa yokuba i-coronavirus ebonakala ngathi isasazeka eBrabant kunye nesifo sephepha lomkhuhlane, uRutte uya kuba ne-alibi ukuba ikhethe ukuvalwa ngokupheleleyo.
Kuthetha ntoni oko kwikhonkrithi? Oku kuthetha ukuba awuvunyelwa ukuba ushiye indlu yakho, indawo ekutshekishwa kuyo yonke indawo kwaye ubanjiwe ukuba unawo amathandabuzo okanye iimpawu ezinokubakho zokuba unayo intsholongwane okanye ukuba awulandeli imigaqo (ii-odolo). Ndichaze ukuba kuthetha ntoni ngokweenkcukacha apha.
Nceda usasaze imiyalezo efana Oku kudlula kwiBloomberg, abathi i-99% yabantu abanentsholongwane e-Italy sele benazo ezinye izigulo kwaye ukufakelwa kwesiyobisi esihanjiswayo kukhankanya ukuba kungakhokelela kwiingxaki zentliziyo ngenxa yokwanda kweeseli ezibomvu zegazi, usengozini yokuvalelwa. EMzantsi Afrika sele bawazise lo mthetho kwaye ungaya ejele iinyanga ezi-6 ukuba usasaza imiyalezo engqubanayo nentetho esemthethweni. Onke amalungelo asusiwe koku.
Ukuba oku kuyenzeka kuwe eNetherlands, kuya kufuneka uthathe amayeza anyanzelekileyo. Umthetho sele udlulisiwe eNetherlands. Lowo mthetho wangena wangena nge-1 kaJanuwari 2020: umthetho onyanzelekileyo we-GGZ. Ukuba awubambisani, kuya kufuneka uye kwisisele sodwa uze ugwinye iipilisi. Kufuneka wamkele nesirinji emzimbeni wakho, kuba oko kuchaziwe emthethweni.
Igama elithi 'ukuvalwa ngokupheleleyo' ayisiyiyo into okanye ingaphantsi 'komthetho wokulwa', okwaziwa ngokuba 'yimeko yonxunguphalo'. Emva koko singqingiwe kumkhosi wethu kunye neqela lamapolisa kunye nabaxhasi. Kwiminyaka yakutshanje baqeqeshelwe ukungajongi ubuntu, kodwa bafumane izabelo. "I-Befehl ist befehl!"
Sasisoloko sinokunqongophala okuluhlaza okwesibhakabhaka esitratweni. Le yunifom eluhlaza okwesibhakabhaka sele ithathelwe indawo yunifomu yasemkhosini yimbonakalo enoburhalarhume, ibhafu, isitshizi sepepile, ii-tasers kunye nesibhamu esidumileyo. Kuya kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba uninzi lwabanyanzeliso lufumane umpu? Kwangoko Ndichazile ukuba umkhosi uxhaswe ngoku kwaye kukho ithuba elifanelekileyo lokuba oku sikwakhona nesizathu sokuba umkhosi wase-Melika ufike eVlissingen kwiveki ephelileyo. Ngokuqinisekileyo baya kunceda kumazwe aliqela e-EU.
Yonke into endiyithethileyo ukuza kuthi ga ngoku iyazaliseka. Ke ngoko awungekhe uphinde undifakele ilebhile njengomphenyisisi wepanoyidi okanye umntu owenza iyelenqe. Ukubuyela umva kunjalo. Nabani na ocinga ukuba ndingumlingisi ocinga ngoku usekhaya kwaye uhlangabezana nento endayixele kwangaphambili. Unokuwafunda amanqaku kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Ndikwazile ukwenza ezi zinto ziqikelelweyo kuba ndibona ngokubhala umbhalo omkhulu. Ndachaza loo script isencwadini yam. Wonke umntu oyifundileyo le ncwadi ndinayo ezinye zokongeza ibhaliwe. Kubalulekile ukuba uyiqonde le ncwadana kwaye uyifundele ngokwenyani. Kwakule ncwadi, endiyipapashe ngasekupheleni konyaka ophelileyo, ndaxela kwangaphambili ukuba kuya kubakho omnye ubhubhane wokugonya ugonyo oluyimfuneko kwihlabathi jikelele.
Kulo inqaku le-18 kaMatshi Ndikwacacisile ukuba le nyikima yokuqhambuka kwe-coronavirus ilufutshane kangakanani kurhulumente wobukomanisi bethekhnoloji. Nge-25 kaNovemba ka-2019, ndachaza indlela ubungxowankulu kunye ne-demedi yedemokrasi besoloko ililungiselelo lobuKomanisi. Kubalulekile ukuba ucofe kwikhonkco kwaye ulifunde elo nqaku.
Ukuba ngoku ucinga ukuba izinto zihamba kakuhle kwaye idemokrasi iza kubuya kwiiveki ezimbalwa kwaye yonke inkululeko yakho ibuye kwakhona, ndingathanda ukukhumbuza ukuba nathi sinengxaki yemozulu. Emva kwayo yonke loo nto, kuye kwafuneka ukuba sikhuphe ngokukhawuleza ukukhutshwa kwe-CO2 ngokukhawuleza ukuze singafi phakathi kweminyaka eli-12. Xa sele siqhele ukuqhuba kwaye sibhabha ngexesha leenyanga ezimbalwa, kunokubakho ingxelo ebonisa indlela ebabemhle ngayo loo manqanaba kumanqanaba e-CO2 alinganisiweyo kwaye sinayo i-alibi yakutshanje yokugcina imeko yongxamiseko .
I-Chaos iyeza kwaye i-Telegraaf ibhengeze umyalezo we-Matshi 18 osele ukhankanyiwe (malunga nokulungiswa kwamapolisa ukuvalwa) ukuba abantu kulindeleke ukuba baphulukane nokuqonda kunye nomonde ngaxa lithile. Emva koko bakulungele ukwenza ngesandla esithe nkqi. 'Ingalo eyomeleleyo'.
Kuqikelelwa ukuba abantu bayoyika, kuba asinguye wonke umntu unokutya okwaneleyo kwaye imali iyakuvalwa. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule ngepin (ukuba sele ungena kwimigca emide yezitolo ezinkulu) kwaye abanye abasebenzi kunye nabantu abazisebenzelayo baya kushiywa ngaphandle kwemali kuba isithembiso sikarhulumente siza kuthatha iiveki ezininzi ukuya kwiinyanga ukulinda ngenxa ye-bureaucracy .
Ngaba uyakhumbula isiphithiphithi sakutsha nje kwiofisi yerhafu? Oko kudlalwe ngaphakathi Julayi 2019 okwangoku. Ke ukuba imeko ngequbuliso ithatha zonke iintlobo zamanyathelo amatsha kwaye kufuneka iseke inkqubo yolawulo entsha ngokupheleleyo ukuze inike abantu umvuzo osisiseko, ngaba ungalindela ukuba konke oku kuya kuhamba kakuhle ngoku? Hayi, kunjalo. Yonke into iba nzima kakhulu kuqheliselo. Kwaye xa abantu bephelelwe yimali, baphelelwe kukutya. Ungayiqikelela into abaya kuyenza abantu abalambileyo.
Umbuzo oza kubuzwa ngabantu abaninzi kungekudala:Ngaba intsholongwane ye-corona yingozi ngokwenene ukuba kufanelekile konke oku?"
Eyona mibuzo mininzi mininzi yile: Ndingenza ntoni? Ndingajongana njani nawo onke la manyathelo angqongqo? Ndingaphendula njani ukuba andivumelani nento?
Ndiyakwazi ukuphendula ngokupheleleyo le mibuzo ukuba uyifundile incwadi yam. Inye kuphela into ecacileyo: unelungelo elisisiseko lokufumana inkululeko epheleleyo!
Urhulumente omtsha wobukomanisi bobuchwephesha, ngoku osasazeka phezu kwakho phantsi kwendlela "yokuvalwa kwe-coronavirus", uyakuzama ukuwathatha onke la malungelo ukuba awukwenzi oko akufunayo. Oku kuthetha ukuba uza kubanjwa xa ungabambisani. Andizukwazi ukuyenza ibe ntle ngakumbi kunokuba injalo. Ndichithe iminyaka eyi-7 yobomi bam ukulumkisa abantu baseDatshi kwaye (ngenxa yeephulo lokukhwetha nge-Intanethi) ndaphelelwa yinto yonke. Ndiyayazi ukuba le izokuza ndizame ukulumkisa. Kodwa likho ithemba! Kukho ithemba elinamandla kakhulu!
Kwinxalenye elandelayo yeli nqaku, ndiza kulicacisa eli themba kwaye ndichaze ngqo into onokuyenza. Ndinokukunika le nkcazo kuye nakubani na osele eyifundile le ncwadi, kuba ngaphandle kolwazi olusisiseko oluxabisekileyo awunakuyiqonda le nto ndiyibhalayo. Kufuneka kuqala wazi ukuba yintoni iskripthi esikhulu kwaye kufuneka uqale uqonde umxholo wento eyenzekayo. Ke funda kuqala incwadi emva koko nifunde lonke eli nqaku.
Qaphela: Ingaba inqaku lam lokugqibela, kuba ndishiye i-Netherlands iminyaka embalwa ngoku kwaye ndizifumanise ndikwilizwe apho ukuvalwa ngokupheleleyo kufakiwe kwaye ndingabanjwa nangaliphi na ixesha. Ke ukuba awusaboni manqaku amatsha avela kule webhusayithi, uyazi ukuba le yimeko.
Ukuqhubeka nokufunda eli nqaku okanye ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zeforum, unokuba lilungu ngokunqakraza kwiqhosha 'lenkxaso yakho'. Oku kuya kukunika ukufikelela kulo lonke eli nqaku kunye neforum kwaye uthathe inxaxheba kumlo wehlabathi elingcono. Ngoku ungathatha inxaxheba kwangoko. Sele ulilungu ukusuka kwi- € 5 / ngenyanga kwaye ke ndixhase ukuze ndiqhubeke nokulwela inkululeko yakho.
Umthombo wezaziso ezikhohlo: parool.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl, nomorefakenews.com, nos.nl
Reader martinvrijland.nl ubonakala esenza isenzo esikhulu seqhawe ngexesha lobuhlanya bentsholongwane ye-corona
tags: ukongeza, kuthetha, ncwadi, ikhonkrithi, intsholongwane ye-Corona, kuyenza, eziziimbalasane, ik, Amazing, Martin, funeka, praktischer, praktische, tips, ilizwe elikhululekile, wat
20 Matshi 2020 kwi-09: 40
Incwadi ithengiwe! Ndiyakrokrela kwaye ndiyathemba ukuba uninzi luya kulandela. Mna ngokwam sendikhuselekile xa ndifunda ukuba ndizothuka kakhulu namanye amazwe sele othukile. Kwezinye iisayithi zeendaba ndifunde nokuphendula malunga nokugxekwa kwinto aza kuyithetha ukumkani ngokuhlwanje, ukuphendula okunje: "Kutheni abantu behlala benemvukelo xa into izakuthethwa ngukumkani, bayeke nje kuwe" i-EUH, hayi! ukucinga okuvakalayo kuvunyelwe!
20 Matshi 2020 kwi-11: 24
Isiphumo sika "Mnumzana Smith" ngoku sisebenza ngokugqibeleleyo kuba abantu boyika kakhulu kwaye bakholelwa kuyo yonke into kwezopolitiko, kwimidiya, kwizifundiswa njl.njl (kuquka nabantu ababesele bevuka kwaye besele begxeka urhulumente kunye ne-MSM baphoswa yonke indlela ebuyela kwimeko yabo yobuthongo yakudala. Ngoku bakholelwa ukuba i-MSM iipesenti ezili-100 kwakhona kwaye ngaphezulu kobusuku baye bajika ukugxeka kwabo kurhulumente kukholo olungaboniyo ngurhulumente omnye.
Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uqonde ukuba iipesenti ezingama-99 zabantu abakungqongileyo baya kuzama ukulwa nawe kwaye bahlasele wena njengabizwa ngokuba "ngabasemagunyeni", kamsinya nje emva kokuba beqonda ukuba awuyikholelwa ingxelo kunye nokuzikhusela. ndifuna ukuhamba.
Sele ndiyibonile le nto xa bendiveza intandabuzo encinci malunga nengozi yentsholongwane yekona. Ndandihlaselwa kabuhlungu ngabantu kangangokuba kwafuneka "ndivale" kwaye kwakufuneka ndiqonde ukuba intsholongwane ye-corona iyingozi kakhulu kwaye kufuneka ndibeneentloni ngeengcinga zam.
Ndiphinde ndahlaselwa kanobom kwi-Intanethi xa ndibonisa ukuba ukusebenza kuka-Bruins kungenzeka kuqapheleke kakhulu kwii "Holllywood" kwaye unokuthi ulandele ezinyathelweni zika "ngelishwa" R. Hauer. Ndihlaselwe kwangoko (mhlawumbi nge-IM) ukuba mandibuyise amazwi am kwaye azokufumanisa ukuba ndingubani kwaye ndihlala phi kwaye ndizilungiselele utyelelo oluvela kuye nakubahlobo bakhe. Uninzi nabanye “ngokuvunywa” khange bahlasele bandoyikisa ngendlela endisabela ngayo xa kusweleke umfundisi olungileyo.
20 Matshi 2020 kwi-12: 28
Imali yehelikopta njengoko icetywayo kumazwe ahlukeneyo yeyona nto iphambili kwinkqubo yemali yedijithali. Abantu abaphulukana nengeniso yabo ngenxa yentsholongwane kaCorona kwaye isixa semali siyathenjiswa xa bekhetha ..., baya kukhetha ukwamkela isixa semali phantsi kweemeko, ke imali yedijithali enomkhondo kunye nokulandela umkhondo.
Michael32 wabhala wathi:
20 Matshi 2020 kwi-12: 29
Obu buxoki bugcwele ngokupheleleyo:
EJamani, izohlwayo nezohlwayo zokuxela ezingalungelanga ngaphakathi kwenkqubo kungekudala:
20 Matshi 2020 kwi-18: 16
Oku kulandelwe ngumyalezo omncinci "ekusenokwenzeka ukuba uyinyani weendaba ezilungileyo" kwiphephandaba elikhulu leendaba eNetherlands, iDe Telegraaf (uhlobo lwe-intanethi). Umntu (okhankanywe ngegama kunye nehlazo ukuba wayengumSilamsi kwakhona ukuqinisa i-thina-izinto eziphikisanayo, loo maSilamsi abolile njl. Njl.) Wagcwala ebusweni amapolisa kwaye kuyacaca ukuba ugwetywe iiveki ezili-10 ejele ngenxa yoku. igwetyiwe.
Oku kwenzelwa ukwenza (imibandela) iziporho zomthetho wokoqobo wokoqobo apho ukukhwehlela esidlangalaleni kunokukhokelela ekubanjisweni (oku kunokuziswa ngokusisigxina kwaye kusebenza nasekukhohlelweni komkhuhlane, njl njl).
20 Matshi 2020 kwi-18: 42
Ewe ndiyifundile. Ndiyabulela kakhulu ukuthumela lo mqondiso: Qhela. ” Ewe, ukucekiswa kwamaSilamsi nako kuqhuba kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, idangatye liza kutshayela ipani emva kokuba kuqhume isiphithiphithi. Bafuna isiphithiphithi kwaye bafuna imfazwe yamakhaya phakathi kwabomthonyama kunye nenxalenye yamaSulumane (emva koko u-Erdogan uya kubeka izinto ngolungelelwano).
Berna B wabhala wathi:
20 Matshi 2020 kwi-20: 56
Molo! . Enkosi ngawo onke amanqaku owabhalayo nasenza simazi ngakumbi uMartin. Ndililungu elitsha kwaye ndinemibuzo malunga nani. Ucebisa ntoni amaSilamsi kule meko? Ngaba ucinga ukuba izixhobo ziya kusetyenziswa kule mfazwe, ngaba iya kuba yeyokwenyama? Ngaba uyazi ukuba kungakanani apho sinokuvalelwa khona eNetherlands. Ngamanye amagama, ngaphakathi kwemida yaseYurophu? Oku kuya kuba yingxaki kwabo baneentsapho ngaphandle kweYurophu kwaye ngenxa yoko andazi ukuba lixesha elingakanani na ukungandiboni. Oku kunokubacaphukisa abantu kunye nexesha. Ngaba ucinga ukuba le meko inokwenzeka ngokwenzeka ehlobo? Okanye ngaphezulu ngo-2023? Leliphi ilizwe eliza kushiyeka kwaye nabantu bengagonywanga? Ngaba ucinga ukuba singalubaleka ugonyo? Enye into eyenzelwe mna. Uthe kwilizwe elitshixwayo. Ngaba awukhange ubone ukuba ngokwakho ngaphambili okanye awukwazanga ukukushiya ngenxa yesinye isizathu? Akukho mbono apho iya kuhlala ikhuselekile nokuba. Isiqithi esinabantu abambalwa okanye into? okanye ilizwe eliya lisiba buthathaka ngakumbi? enkosi phambili 🙂
20 Matshi 2020 kwi-21: 10
Enkosi. Funda amanqaku kwiiveki ezi-2 ezidlulileyo kwaye uya kufumana iimpendulo kwimibuzo yakho. Ndikhuthaza ukufunda incwadi, kuba iyisiseko; nakumaSilamsi.
Andishiyanga kuba bendingenayo imali, kodwa futhi ngoba ndiyazi ukuba ayichaphazeli ukuba uphi emhlabeni. Le ntsholongwane yesithsaba ibonisa isicwangciso sikaLucifer (jonga incwadi).
20 Matshi 2020 kwi-21: 38
Ungathanda ukuba phi Kwisiqithi esingavuthwanga
Kwaye nithathele ingqalelo umzuzu woku-1; 58 iphumelele isirinji yomkhuhlane anti
verdo wabhala wathi:
20 Matshi 2020 kwi-21: 39
Enkosi. Ngaba sele uyiyalile incwadi yakho? Andikaze ndifunde iincwadi, ngoku kufuneka ifikile
20 Matshi 2020 kwi-12: 50
Ngexesha leBhunga laBaphathiswa, abaphathiswa bamisela umzekelo omhle namhlanje: bakhiwe ngokufanelekileyo.
"Nikelani ingqalelo omnye komnye"
"Namathela kwimithetho kungenjalo izinto ziya kuhamba gwenxa"
20 Matshi 2020 kwi-13: 27
Ngapha koko, sikwidemokhrasi kuba AKUKHO Zokwenyani
inkcaso ikhona. Kwakhona wonke umntu uthe cwaka, amaqhawe akwetyibilika.
Ndithi kuMartin nakwiiposta kule ndawo, ningamagorha okwenene. UMartin qhubeka nje naloo nto ingumsebenzi wakho kulo mhlaba, unikezwe 'nguthixo' okanye nokuba ngubani na.
Nangona ndingenguye umKristu ndisafuna ukubhekisa kubo
Kwabase-Efese 6: 11 ngokufutshane sisilwa nenyama negazi kodwa silwa nabaphathi bobumnyama.
Ukukhetha phakathi kokulungileyo nokubi. Abantu bahlala bekhetha into elungileyo, nangona eyona ndlela inzima.
Ukungabi namacala wabhala wathi:
20 Matshi 2020 kwi-14: 02
"Nceda uqaphele: le inokuba inqaku lam lokugqibela."
Okwangoku, ndiyathemba ukuba unokuhlala ngaphandle kwezifo zentsholongwane yokwenyani. Sonke siphantsi kwababukeli, sonke sihamba kumaxesha anzima. Ngamana amandla angaba nawe.
Thatha ngononophelo kwaye enkosi.
20 Matshi 2020 kwi-20: 41
Martin amanqaku akho kunye neempendulo zisaza kugquma kule milinganiso. Akukho nto inokwenziwa ngale nto kwakhona, oku kubizwa ngokuba kukuphuhliswa. Intsholongwane ka-anti sele yenziwe, asizanga ngenxa yokuhamba rhoqo.
Xa abantu bedibanisa iipuzzle, iba yinto engalindelekanga ibe inkulu kwaye iphakame ngaphezulu kwayo yonke into nomntu wonke, kubandakanya nezithixo zomhlaba!
Ngale ndlela sinxibelelana notata wokuqala weengcinga zethu kwaye onxibelelana noThixo wokwenene ngaphandle kweli lizwe. Ayinakuza apha kuba amaza apha apha asezantsi kakhulu. Kuphela sinokubonakalisa uThixo oyinyaniso ngokukhanya kwangempela, uthando nenyaniso.
Kungenxa yoko le nto eli lizwe liya kusithiya, kodwa sihamba phezu kobubi kwaye singazami phantsi kwamanzi.
Zazi ukuba ungubani kwaye uvelaphi.
I-orenji ngaphezulu, ilanga lingaphezulu. Sivela kakhulu, ungazivumeli ukuba uthethe phantsi!
Mamela ngononophelo, lulwimi lwethu kwaye bekusoloko kulapho!
20 Matshi 2020 kwi-23: 36
Ngokubhekisele kwi-xanders, xandernieuws iyawa ngokwam. Ngaba ndingatsho ukuba indawo yobuKristu inokuba yinto entle kunokuhlwayela nje usizi?
Ndithumele umbono olungileyo kodwa awuzukuposwa, mhlawumbi kungenxa yempazamo yobugcisa 😉
Intloko kwiindaba zesanti
Kuya kufuneka sikhethe: ilizwe elidala, siyintsomi.
okanye kugqityiwe sime ngaphezulu kwe lusizi.
20 Matshi 2020 kwi-23: 55
Ewe, uXander uza kugcwala
21 Matshi 2020 kwi-11: 19
Andikwazi ukucinga ukuba iindaba ze-xander ayisiyo inkcaso elawulwayo (kodwa inokuba ayilunganga) kuba andinakucinga umntu ophaphileyo ukuba acinge kakuhle (le yingxaki enkulu yabemi abangama-99% kwaye ngoko ke ngokuthe ngqo kwihlabathi) kunye neendaba ezizimeleyo ziwela le-top-down global mass hysteria hoax.
21 Matshi 2020 kwi-11: 33
Xa sijonga ukunyuselwa uloyiko lwe-coronavirus (ilungelo lezopolitiko lase-Netherlands), ndingafikelela kwisigqibo sokuba u-Xander uzamile ukuguqukela kwinkampu yam kwangethuba ukuze abambe umkhombandlela wabafundi. Ngoku ubonakalisa ubuso bakhe bokwenyani.
21 Matshi 2020 kwi-11: 53
Ewe, oko akumele kusothuse. Ubuninzi obusasazekayo bungako. Basebenzisa i-mannequins 'ye-Illuminati' yenyani yokusasaza ukunika abantu abaqhelekileyo imvakalelo engalunganga. Bayayithanda loo nto kwizicwangciso zabo. Kuyamangaza ukuba akukho namnye kubo, ewe, abo banayo 'intsholongwane' kunye nokusasaza bafa ngokwenene.
Kuyabonakala ukuba abafuni ukusityhalela kude eso senzo. Abantu abaweli kwizicwangciso zabo ezimbi kwaye bahlala bethembekile. Xa isonjululwe, iikhomishini zenyaniso ezivela kubantu abaqhelekileyo ziya kuza kurhwebo lwabo kwaye zihambe njengoko kwenzekile eMzantsi Afrika. Oku kunokwenzeka ukuba abantu abaqhelekileyo bayayifuna.
« Ukungena kweSunning kwiCoronavirus Panic nguGqr. Wolfgang Wodarg?
Xa kufika ukuvalwa kwe-coronavirus iyonke kwaye ijongeka kanjani: izithuba zovavanyo kunye nomkhosi »
Utyelelo lulonke: 4.173.673
Ukuqikelelwa kweMfazwe yamakhaya yase-US ibonakala ikufuphi kwaye ikufuphi: Umkhosi weBMM uhamba nemfazwe eGeorgia
I-RCS op ICoronavirus covid-19: esingayivayo iMaurice de Hond kunye noWillem Engel
UBenzo Wakker op ICoronavirus covid-19: esingayivayo iMaurice de Hond kunye noWillem Engel